Lee Automobile ၏ ၂၀၂၁ အသားတင် အရှုံး သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၁၁၁. ၉% တိုးတက်ခဲ့ပြီး CTO ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည် - Pandaily
Feb 25, 2022, 20:03ညနေ 2022/02/25 23:18:08 Pandaily
တရုတ် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ Li Automobile၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် စတုတ္ထ သုံးလပတ် နှင့်တစ် နှစ်လုံး အတွက် စစ်ဆေး ခြင်းမရှိသော ဘဏ္ results ာရေး ရလဒ်များကို သောကြာ နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စတုတၳ သံုးလ ပတ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ သည္ ယြမ္ ၁၀ ဒသမ ၆၂ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆၇ ဘီလီယံ) ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကထက္ ၁၅၆ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ခဲ့ကာ စုစုေပါင္း အျမတ္ ေငြ မွာ ယြမ္ ၂ ဒသမ ၃၈ ဘီလီယံ ရွိကာ ယြမ္ ၂ ၂၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ခဲ့သည္။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Li Automobile ၏စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ နှင့်စုစုပေါင်း အမြတ် သည်ယွမ် ၂၇. ၀၁ ဘီလီယံ နှင့် ယွမ် ၅. ၇၆ ဘီလီယံ အသီးသီးရှိသည်။ သို့သော် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အသားတင် အရှုံး သည်ယွမ် ၃ ၂၁. ၅ သန်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင် ယွမ် ၁၅၁. ၇ သန်း ရှိရာမှ ၁၁၁. ၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် လီ သီ ယမ် ၃၅, ၂ ၂၁ ကို တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၄၃. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်လျှောက် လုံးတွင် Li ONE သည် အစီး ၉၀, ၄ ၉၁ စီး တင်ပို့ ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင် ၃၂, ၆ ၂၄ စီး မှ ၁ ၇၇. ၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ကုမ္ပဏီသည် lithium 12,268 ကို တင်ပို့ ခဲ့ပြီး ယခင်နှစ် ထက် ၁၂၈. ၁% တိုးတက်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ ကုမ္ပဏီ တွင် လက်လီ အရောင်းဆိုင် ၂ ၀၆ ခု ရှိပြီး မြို့ ၁၀၂ မြို့နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု စင်တာ ၂ ၇၈ ခု ရှိပြီး မြို့ ပေါင်း ၂ ၀၄ ခုတွင် တရားဝင် ကား ကိုယ်ထည် ဆိုင် များ ဖွင့်လှစ် ထားသည်။
၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္ ပထမ သံုးလ ပတ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အပ္ႏွံ မႈသည္ အစီးေရ ၃၀၀၀၀ မွ ၃၂၀ ၀၀ ၾကား ရွိ မည္ဟု ကုမၸဏီက ခန္႔မွန္း ထားၿပီး စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ မွာ ယြမ္ ၈ ဒသမ ၈၄ ဘီလ်ံ မွ ၉ ဒသမ ၄၃ ဘီလ်ံ ၾကား ရွိ မည္ဟု ဆိုသည္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Li Auto သည် Li ကို ပို့ ရန်စီစဉ် နေပြီး Chip မလုံလောက် မှုကြောင့် ရေဒါ နှစ်ခု ပျောက်ဆုံး နေသည်
Lee Automobile သည် စီမံခန့်ခွဲမှု အပြောင်းအလဲများကို ယနေ့ ကြေငြာခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကြောင်းပြချက် များကြောင့် Wang Kai သည် ကုမ္ပဏီ ၏နည်းပညာ အရာရှိ ချုပ် ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ရန် ကမ်းလှမ်း ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အင်ဂျင်နီယာ ချုပ် Ma Donghui သည် စမတ် မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ တွင် Li Automobile ၏သုတေသန နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲ ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဝမ် သည် ချောမွေ့သော အသွင်ကူးပြောင်း မှုကို သေချာစေရန် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ ကုမ္ပဏီ၏ အကြီးတန်း အတိုင်ပင်ခံ အဖြစ် ဆက်လက် လုပ်ကိုင် မည်ဖြစ်သည်။
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ Lee Automobile က တတိယ သုံးလပတ် ဝင် ငွေကို တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တတိယ သံုးလ ပတ္ အတြက္ စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ သည္ ယြမ္ ၇ ဒသမ ၇၈ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၁ ဘီလီယံ) ရွိခဲ့သည္။
Auto Nov 29 နိုဝင်ဘာ 30, 2021